Ha mechara kpughee nnukwu ụgbọala na-adọkpụ maka Star Wars: Ikpeazụ Jedi | Akụkọ akụrụngwa
Ihe nke asatọ nke otu n'ime ihe ndị kachasị mkpa sagas na akụkọ ihe mere eme nke sinima dị njikere, A ga-egosiputa ya na ihe nkiri niile gburugburu ụwa na Disemba 15 na anyi kwenyesiri ike na ichoghi uche ya. Agbanyeghị, nke a abụghị ihe ịtụnanya karịa ụlọ ụgbọala ọhụrụ a, mana onye isi ọrụ ya, Rian Johnson, na-atụ aro ka ị ghara ịhụ ya.
Mana olee otu ị ga-esi tinye ọchịchọ gị ịhụ ya, anyị niile chọrọ ịma ka akụkọ a si na-aga n'ihu na otu oke akụkụ nke ike na-aga n'ihu. Ya mere echefula ya, mgbe ịwụchara i nwere ụlọ na-adọkpụ zuru ezu.
Ihe ngosi dị egwu nwere ihe karịrị nde mmadụ asaa na akaụntụ YouTube, na-eme ka o doo anya otú ihe nkiri ahụ ga-esi gaa nke ọma. E gosipụtara ya na Minnesota n'oge egwuregwu nke Vikings nke chere ihu na Chicago Bears, ka ndị North America si nwee mmasị na egwuregwu dị ọcha. Ọ bụ ụgbọala na-adọkpụ nke abụọ mgbe nke anyị hụrụ n'April mere ka anyị hapụ ọtụtụ amaghị na Rey mechara zute Luke Skywalker toro na mbara ala Ahch-To, ihe ijuanya ikwu obere, mana obi abụọ adịghị ya na Rey bụ ezigbo Jedi.
Obere ihe karịrị nkeji abụọ nke mmetụta uche na mpempe akwụkwọ ụgbọ ala a, ma kpachara anya, n'ihi na enwere ihe ngosi nke Leia nke onye egwu Carrie Fisher gbara. O yiri ka atụmatụ ahịa ahụ ga-abụ otu ihe ahụ ọ dị na mbụ, anyị enweghị obi abụọ ọ bụla na ị na-agụta ọnwa abụọ na ụbọchị ise fọdụrụ iji zụta tiketi gị wee gaa sinima kachasị amasị gị. Na Actualidad Gadget anyị ga-eme ka ị mata ozugbo gbasara ụwa dum Star Wars.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Home » Ha mechara kpughee nnukwu ụgbọala na-adọkpụ nke Star Wars: Jedi Ikpeazụ
Anyị nwalere Koogeek ọbara mgbali nyocha dakọtara na gam akporo na iOS